Mampanahy ny aoriana… | NewsMada
Mampanahy ny aoriana…
Sarotra aloha ny hiresaka zavatra hafa ankehitriny, tsy te-hahalala afa-tsy ny Barea ny vahoaka. Mbola ao anaty haravoana sy hafaliana ny Malagasy tsy vakivolo ka tsy te hihaino olona mamalan-kira. Na ho ela na ho haingana anefa, ho vita ihany ny Can. Hiverina ny fiainana andavanandro. Mbola tsy afaka akory ny fahantrana, mbola tsy fongana ny kolikoly sy ny halatr’omby, ny vaky fasana, ny tsy fandriam-pahalemana izay tsy azo odian-tsy hita. Fa ny zavatra nampalahelo sy nahamenatra, difotry ny loto tetsy Analakely ny ampitson’ny alahady nandresena ny Kongoley.
Maimbo ampy tanteraka ny tontolo na efa niezaka nanasa aza ny mpamono afo. Rehefa mifety ve dia tsy maintsy manao izay tiana atao na koa manao izay danin’ny kibo. Mivalan-drano etsy sy eroa. Raha nitondra avo ny voninahi-pirenena ny Barea, ny fihetsiaka tahaka izao no manaratsy endrika ny firenena iray manontolo. Efa mba miresaka an’i Madagasikara sy ny Malagasy amin’ny lafiny tsara ny gazety sy haino aman-jery any ivelany. Rehefa vita ny Can, hiverina hilomano ao anaty loto, fako, korontana indray ny rehetra. Tsy ilaina ny fifampifehezana fa efa mandresy isika ka izao fiaraha-mientana izao no tokony havadika ho fiarahamonina vaovao hanjakan’ny fahadiovana sy ny fifanajana. Fandresena lehibe koa izay!
Sanatria ve voahozona tsy maintsy hiaina ao anaty korontana sy savorovoro isika. Rehefa misy mamoy ny ainy vao afaka ny hilamina. Sorona firy no ilaina e.
Jereo anie ny baolina any Ejypta, rehefa hoe amin’ny 7 ora hariva ny lalao no manomboka, voahaja izay. Tsy misy fotoan-gasy ka hoe mbola tratry ny fitohanan’ny fifamoivoizana ny mpitsara na resaka toy izany. Lesona tsara mba sintonina izany. Raha ireny zavatra heverina ho kely sy bitika ireny aza tsy vitantsika dia inona izany ny azo antenaina? Mbola mitohy ny nofy hatreto fa aoka mba tsy hifoha ao anaty fahoriana lava izao. Azo atao ny manova. Nanome ohatra hita maso ny Barea.